ဒါ့အပြင် Oppo ရဲ့မမြင်နိုင်တဲ့မျက်နှာပြင်ကင်မရာနည်းပညာကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့တယ် Androidsis
စမတ်ဖုန်းလောကတွင်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုမကြာမီလာတော့မည်။ ဒါကအကောင်အထည်ဖော်မှုဖြစ်လိမ့်မည် မြင်ကွင်းပေါ်တွင် "မမြင်နိုင်သောကင်မရာများ", Oppo သည်၎င်းကို၎င်း၏အနာဂတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင်အသုံးပြုရန်အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ ဒီနည်းပညာကိုစတင်လေ့လာပြီး ၂၀၁၇ အစောပိုင်းမှာစတင်ခဲ့သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၏တိုးတက်မှုအချို့ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့် Oppo အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး ကပြောကြားခဲ့သည်။
မှတ်မိရမည့်အချက်မှာစက်မှုလုပ်ငန်းသည်မျက်နှာပြင်အပြည့်အစုံပါ ၀ င်မှုသည် ၂၀၁၆ နှောင်းပိုင်း Xiaomi Mi Mix ကိုစတင်အပြီးတွင်အမှန်တကယ်စတင်ခဲ့သည်။ ထို အချိန်မှစ၍ မကြာသေးမီကပေါ်ပေါက်လာသည့် pop-up front ကဲ့သို့ bezel မပါသောစမတ်ဖုန်းအတွက်ဖြေရှင်းနည်းများစွာရှိသည်။ ကင်မရာများနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအပေါက်။ ဒါပေမယ့်ရှင်းပါတယ် မျက်နှာပြင်အောက်ရှိကင်မရာများသည် "အဆင်ပြေစေရန်မျက်မြင်မရမြင်နိုင်သော" စမတ်ဖုန်းများ၏အနာဂတ်ဖြစ်သည်, ဤနည်းပညာနှင့်အတူစီးပွားဖြစ်စက်ကိုမြင်ရရှေ့မှာအချိန်သာကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ Oppo အင်ဂျင်နီယာကဒီအကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ဒီနည်းပညာကိုအကောင်အထည်ဖော်ရာမှာအကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကတော့ဘယ်သူမှအောင်မြင်စွာမစီမံနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားဖြစ်စမတ်ဖုန်းသို့သယ်ဆောင်ရန်အခက်အခဲများစွာရှိသောကြောင့်၎င်းသည်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုမြစ်အောက်ပိုင်းရှိကျောက်တုံးများကိုခံစားရုံဖြင့်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။
မျက်နှာပြင်အောက်ရှိကင်မရာသည်အခြားဟာ့ဒ်ဝဲများနှင့်အဆင်ပြေစွာအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပြီးကင်မရာအတွေ့အကြုံကိုပြည့်စုံစေရန် algorithms လိုအပ်သည်။ သို့သော်မှန်ကန်စွာအကောင်အထည်ဖော်လျှင်၊ စမတ်ဖုန်းမျက်နှာပြင်အတွေ့အကြုံကိုပြီးပြည့်စုံစေလိမ့်မည်.
အဆိုပါအင်ဂျင်နီယာကထပ်ပြောသည် ကိုယ်ခန္ဓာကိုအလေးချိန်မရှိသည့်အပြင်ကင်မရာအထက်ရှိကြည့်ရှုသည့်နေရာပင်လျှင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်မျက်နှာပြင်အပြည့်ရရန်ရုပ်ဆိုးထစ်များသို့မဟုတ်ရွေ့လျားနေသောအစိတ်အပိုင်းများမလိုအပ်ပါ။
ကံမကောင်းစွာပဲ, မည်သည့်ထုတ်လုပ်သူမဆိုနည်းပညာကိုပြီးပြည့်စုံအောင်မလုပ်ခင်အချိန်အနည်းငယ်ကြာ ဦး မည်ဟုထင်ရသည်။ Oppo, Xiaomi နဲ့ Samsung ရှေ့ပြေးပုံစံကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကထုတ်ဖော်ပြသခြင်းကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစမ်းသပ်မှုသာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Xiaomi ၏သရုပ်ပြပုံနှင့်ဆင်တူသည် 100 watt အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းနည်းပညာ ဒီနှစ်အစမှာ။ ၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆဲဖြစ်ပြီးလအနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်း၏စီးပွားဖြစ်ရောင်းချမှုသည်ရပ်ဆိုင်းသွားပြီဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီများသည်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့သည့်အရာနှင့်တူသော pop-up ကင်မရာဖြေရှင်းနည်းများကိုအာရုံစိုက်မည့်ပုံရသည် Asus က Zenfone 6.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ဤသည် Oppo ၏မမြင်ရသောမျက်နှာပြင်ကင်မရာနည်းပညာ၏တိုးတက်မှုဖြစ်သည်
Gears POP နဲ့အတူ Gears of War ရဲ့အဆိုးဆုံးဗားရှင်းကိုသင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါပြီ။